Sidee S/LAND ula dhaqmeysaa xildhibaanadi P/land laga qabtay? - Caasimada Online
Home Warar Sidee S/LAND ula dhaqmeysaa xildhibaanadi P/land laga qabtay?
Sidee S/LAND ula dhaqmeysaa xildhibaanadi P/land laga qabtay?
Hargeysa (Caasimada Online) – Saraakiisha ciidamada ee Somaliland oo lahadlay Caasimada Online ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay ula dhaqmayaan xildhibaano ay sheegeen iney ku qabteen dagaaladii ka dhacay duleedka degmada Dhadhar.
Saalax Xersi Dhagasool, Taliyaha Ciidamada maamulka Somaliland ayaa sheegay iney maxkamad soo taagayaan dhamaan xildhibaanada uu sheegay iney kamid yihiin baarlamaanka Puntland ee lagu qabtay dagaalkii Isniintii dhacay.
Taliyaha wuxuu sheegay in maxkamada Hargeysa ay kasoo muuqdan doonaan ku dhawaad 10 maxbuus oo uu jiro xildhibaan Canjeex oo kamid ah xubnaha baarlamaanka ee maamulka Puntland, sida uu sheegay taliyaha.
Taliye Dhagasool, wuxuu sheegay in garsoorka Somaliland ay u gudbiyeen dacwada loo heystao maxaabiista, dhawaana maxkamad lasoo taagi doono dhamaan dadkii dagaalka lagu qabtay.
Gobolka Sanaag ayaa waxaa ka taagan xiisad dagaal oo u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland , waxaana Isniintii dagaal u dhaxeeyay labada maamul uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada dagaalamay.